HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMashaariicda Khayaamada ah ee ku kacaya 320 Bilyan Lira
13 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, hyperlinks, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Qiimaha mashaariicda waalan ee bilyanka ah
'Mashruuca waalan ee Madaxweyne Tayyip Erdo crazyan' sida lagu qeexay ajandaha kanaalka ee Istanbul halka awoodda mashruuca Fatih sannadihii ugu dambeeyay, Yavuz Sultan Selim Bridge, Buundada Cusgazi, garoonka diyaaradaha 3-aad iyo isbitaallada magaalada oo hoos marayay. Wadarta qiimaha 5 maalgashigu wuxuu ahaa 320 bilyan oo rodol.
Oğuz Gündoğdu kana yimid BirgünWaxaa la qiimeeyay shanta mashruuc ee la xaqiijiyey sanadihii ugu dambeeyay ka dib ajendaha Shirka Istanbul. Mashaariicda lagu soo bandhigay magacyo ay ka mid yihiin 'mashruuca qarnigii' waxaa lagu soo qoray sidan:
Mashruuca Fatih waxaa la bilaabay 2010 wuxuuna miisaamiyay 8 bilyan 500 milyan oo gini. Sida qorshuhu yahay, dhammaan ardayda dalka waxaa lagu baran doonaa kiniinno 4 sano gudahood ah. Labajibaaranaha guud ahaan "mashruuca qarnigii," ayuu soo bandhigay mashruucu markii u horreeyay ajandaha isagoo wata kharashyo aan caadi ahayn. Kadib, Bishii Sebtember 2013 Birol Ekici, oo ah kuxigeenka hoosaadka wasaarada waxbarashada qaranka, ayaa shaqada laga joojiyay. Mashruucan, oo ay tahay in la dhammaystiro 2014, ayaa la kordhiyey 2015 illaa 2017. Laga bilaabo Janaayo 8, 2020, waxaa la fahamsan yahay in koorsada kumbuyuutarka lagu qabtey kaarar ku yaal Diyarbakır.
Buundada 'Bosphorus Bridge', oo la furay 1974, waxay ku kacday $ 21 milyan iyo Buundada Fatih Sultan Mehmet, oo la furay 1988, waxay ku kacday $ 125 milyan, halka buundada 3aad la dhisay 3 bilyan oo doolar. Si kastaba ha noqotee, kalabar saamiyada buundada waxaa loogu wareejiyay Shiinaha 658 milyan oo Yuuro. 'Jeerooyinka dadweynaha kama soo bixi doonaan hal qalin' waxaa loo yaqaan mashruuca ka dib furitaanka culeyska miisaaniyadda isla markii furitaanka la fahmay. Marka loo eego jawaabta Agaasimaha Guud ee Wadooyinka, Mudane Adıgüzel, CHP, 135 milyan 3 kun oo gawaari ayaa ka gudbay Buundada 2016aad, oo ah 2019 kun oo gaadiid maalintii, laga bilaabo Sebtember 41 ilaa Juun 805. Sidaas darteed, xitaa saddex meelood meel ka mid ah dammaanadda gaariga ee la siiyay ku dhawaad ​​3 sano lama gaari karin. Tan iyo qiimaha buundada tan iyo markii la furay 1,8 milyan ginni maalintii celcelis ahaan.
Madaarka saddexaad ee la furay Oktoobar 29, 2019 wuxuu sababay xiritaanka garoonka diyaaradaha Atatürk. Xiritaankan ayaa loola cararay garoonka diyaaradaha ee Ataturk illaa iyo Janaayo 3, 3 si loogu hawlgalo xuquuqda TAV 2021 milyan oo Yuuroo la siin doono magdhow ayaa la fahamsan yahay. Hamdi Topçu, madaxweynaha Turkish Airlines intii u dhaxeysay 389 iyo 2010, wuxuu ku yiri buugiisa '' Local to Global '', waxaa ku filnaan laheyd ilaa 2015 haddii waddo dheeri ah laga dhiso garoonka Atatürk.
Buundada Cusmaangazi oo ay siineysay shirkada howl wadeenka ah ee dammaanad qaaday kala guurka gaariga ee doolar sarrifka ah ayaa la fahmay. Maamulaha guud ee shirkadda Otoyol AS Bülent Esendal, oo maamusha buundada lacagta lagu dhisayo buundada, oo lagu kordhiyay 2019 boqolkiiba marka la galayo sannadka 50, ayaa sheegay inaysan bedeli karin lacagta canshuurta sababta oo ah kala duwanaanshaha sicirka doollarka. Buundada gawaarida ee sanadka 2018 ayaa ahayd 72 rodol, halka lacagtaan ay ku kordhisay 2019 rodol sanadka 103 iyo 2020 rodol sanadkii 118. Sannadka 2018 oo keli ah, qiimaha Cusmaangazi iyo Yavuz Sultan Selim Bridges ee miisaaniyadda waa 1,8 bilyan TL sida ku cad macluumaadka uu siiyay Wasiirka Gaadiidka Cahit Turhan. Lacagtaani waa ku dhawaad ​​2018 jeer gunnada madaxweynaha.
Mashruuca Cisbitaalada Magaalada ayaa dadwaynaha loo soo bandhigay 2017. Madaxweyne Erdoğan ayaa u cararay isbitaalada magaalada isagoo leh, alim Riyadeyda 14 sano waa mashruuca aan jeclahay. Sanadihii 2018 iyo 2019, isbitaallada magaalada, oo midba midka kale la furay, ayaa loo baneeyay miisaaniyadda waqti yar sida mashaariicda kale ee waalan. Ilaa dhamaadka sanadka 2019, qiimaha 25ka sano ee isbitaalada magaalada ee adeega ayaa ka badan $ 142 billion. Lacagtaani waa mid aad u balaaran oo lagu maalgaliyo dhismaha 800 isbitaal. Dhaleecaynta dhegta, ka dibna xukunka xukunka, "halkaas, waxyeello", ayuu u tegey inuu dhaho. Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca ayaa sameysay bayaan ku saabsan dhaleeceyntan 26-kii November, 2019: “Fikrad ahaanteena, isbitaallada ma ahan hay'ad ganacsi laakiin waa kiro aan bixinno, miyaanan bixinayn?
Mashruuca biyo-xidheenka Qubrus
envisaging bixinta biyaha ka soo Turkey iyo Northern Cyprus "Mashruucan qarnigii" loo yaqaan furitaanka mashruuca ayaa waxaa lagu qabtay on October 17, 2015. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Raiisul wasaare Ahmet Davutoglu ayaa ka qeyb galay xaflada ka dhacday Mersin. Davutoğlu wuxuu ku tilmaamay mashruucu inuu yahay shaqsi caalami ah, wuxuuna yiri, uz Waxaan dhiseynaa buundo biyo oo weyn oo aduunka laga dhisayo. Waa qaran wax walbana leh, oo u dhashay wax walba .. Waxaa lagu dhammeystirey diiradda doodaha, mashruucu wuu qarxay, ugu yaraan 5 sano. 5 mayl oo xeebta ka xigta Anamur waxay qarxiyeen tuubooyin biyaha daadsan. Qiyaastii 250 mitir oo qoto dheer ayaa laga arki karaa dusha sare ee badda. Biyo ayaa la arkaaya oo dhex socda tuubooyinka. Mashruucu wuxuu ku kacay 1,6 bilyan oo rodol.
Wadarta qiimaha maal gashiga: 320 billion rodol
Qiimaha maal gashiga: 8,5 bilyan rodol
2-Buundada Yavuz Sultan Selim:
Qiimaha maal gashiga: 3,5 bilyan euro
Lacagta maanta: 23,5 bilyan oo rodol
3- Cusmaan Cusmaan:
Qiimaha maal gashiga: 2,5 bilyan
Lacagta maanta: 17 bilyan oo rodol
4- 3. Madaarka:
Qiimaha maalgashiga: $ 35 bilyan
Lacagta maanta: 206,5 bilyan oo rodol
5- 20 Isbitaalka Magaalada:
Qiimaha maalgashiga: $ 11 bilyan
Lacagta maanta: 64 bilyan oo rodol
Qiimaha mashaariicda waalan ayaa hoos u dhigi doona shahaadada
2018 Waxay Noqon doontaa Sanadka Mashruuca Crazy
Qiimaha Mashruuca Mashruuca Genelka 600 Million Lira
Gaadiidka 320 4 isla wakhtigaas wuxuu u shaqeeyay suugaanta aduunka
320 Waqti dheeraad ah Metrobus | Istanbul
320 kun tan oo asfalt ah ayaa loo tuuraa usha
Qiimaha Mashaariicda Khayaamada
Qiimaha Madaarka Istanbul
Qiimaha Buundada Cusgaani
Qiimaha Buundada Yavuz Sultan Selim